Nagarik News - जेलजस्तो जिन्दगी
होमपेज / नागरिक शनिबार / जेलजस्तो जिन्दगी
जेलजस्तो जिन्दगी	04 May 2013 २१ बैशाख, २०७०
शिव रिजाल Be the first to comment! 12345 (1 Vote)
१४ फेब्रुअरी १९८९। लन्डन महानगरमात्र होइन सारा विश्व भ्यालेन्टाइन्स डे को अवसरमा प्रेममय हुँदै थियो। 'मिडनाइट्स चिल्ड्रेन' र 'सेम्'जस्ता अंग्रेजी उपन्यासका लेखक सलमान रुस्दीमाथि चाहिँ यही मितिदेखि घृणाको ज्वाला मडारिन थाल्यो। दूर देशका केही शक्तिशाली धर्मगुरुहरूलाई ४२ वर्षीय भारतीय मुलका रुस्दीको उपन्यास 'सतानिक भर्सेज' मन पर्ने कुरो भएन। रुस्दीमाथि फतवा अथवा मृत्युदण्डको सूचना जारी भयो। रुस्दीलाई मार्न सक्नेलाई करोडौंको बक्सिस घोषणा गरिन्छ। यो सन्देश रुस्दीलाई सुनाउँदै गर्दा उनका साथीहरूको स्वर डरले काँप्न थाल्छ। विख्यात उपन्यासकार रुस्दीको आत्मकथा 'जोसेफ एन्टन' यही दिनको प्रसंगबाट सुरु हुन्छ। यो आत्मकथा एक स्वतन्त्र लेखकले तेह्र वर्षसम्म बाँचेको कठिन समयको कथा हो। ६३६ पृष्ठ लामो पुस्तकसँग बलिया वैचारिक खुराक छन्। यसले भन्छ, कथा अथवा साहित्य आफंैमा एउटा शक्ति हो। कथाविना विचारका नयाँ क्षितिज खुल्दैनन्। मानव सभ्यता कथाहरूको खेल हो। धर्म धान्न लेखिएका शास्त्र पनि कथा हुन्। कथा यथार्थ होइन, यथार्थचाहिँ कथाजस्तै हो। त्यसकारण कथाका पुनर्लेखन अथवा आविष्कार गरिरहनुपर्छ। कथाकार अथवा लेखक आधुनिक प्रजातान्त्रिक अनि सेकुलर मानव सभ्यता चलाउन चाहिने आवश्यक मित्र हो। धर्म अनि संस्कारका नाममा शब्दहरू बरफझैं जमेर बसे भने हामी त्यहाँ निसास्सिन थाल्छौं। नयाँ कथा लेखिनु वैज्ञानिक जगतमा हुने आविष्कारजस्तै उपलब्धि हो। साहित्य र विज्ञानले हामीलाई पुराना विचार अनि अभ्यासहरूको भारबाट मुक्त गराउँछ। जोसेफ एन्टन २००२ मार्च २७ मा आएर टुंगिन्छ। कडा सुरक्षासाथ हिँड्नु रुस्दीका लागि तेह्र वर्षे लामो अनुभव भइसकेको थियो। त्यस दिन पनि उनी सुरक्षाबलसहित बेलायती गुप्तचर संस्थाका अधिकारीले बोलाएअनुसार लन्डनको एक होटल पुग्छन्। ती अधिकारी अब हमलाको सम्भावना नभएको र उनलाई दिइँदै आएको सुरक्षा संयन्त्र बिस्तारै कम गरिने बताउँछन्। रुस्दी भन्छन्, 'म आजैदेखि स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, धन्यवाद। तपार्इंलगायत सम्पूर्ण बेलायती प्रहरी अनि गुप्तचरहरूलाई।' आफू स्वतन्त्र र साधारण जीवनमा फर्केको हुँकार गुडिरहेको ट्याक्सीलाई हात दिएर व्यक्त गर्छन्, उनी। हाम्रो शहरमा गुड्ने ट्याक्सी र स्वतन्त्र जीवनको सम्बन्ध बडो मार्मिक ढंगमा उजागर गर्दै यो आत्मकथा टुंगिन्छ। यो तेह्र वर्षमा रुस्दीको जीवनमा निकै परिवर्तन हुन्छन्। पहिली पत्नी क्लारिसा लुवार्डसँगको सम्बन्ध १९८७ मा समाप्त भइसकेको हुन्छ। रुस्दीमाथि फतवाको मिसाइल बर्सन थाल्दा छोरा जफर आठ–नौ वर्षको मात्रै हुन्छ। यही बीचमा रुस्दीको अमेरिकी लेखिका मरिएन विगिँससँग सम्बन्ध जोडिन्छ, चिसिन्छ र १९९३ मा टुंगिन्छ। त्यसपछि उनी झन्डै बाह्र वर्ष कान्छी एलिजावेथ बेस्टसँग जोडिन पुग्छन्।इलिजाबेथले रुस्दीलाई बलियो सहारा दिन्छिन्। मिलन नामको पुत्रलाभ हुन्छ उनीहरूलाई। छोरो जन्मिएको केही महिनामा तिनको विवाह हुन्छ १९९७ मा। पुस्तकको अन्त्यतिर एलिजाबेथसँगको उनको सम्बन्ध चिसिन थालेको पाठकलाई थाहा हुन्छ। भारतीय मुलकी अमेरिकी चर्चित मोडल पद्मा लक्ष्मीसँग नजिकिएका रुस्दी अमेरिकातिरै बस्न इच्छुक देखिन्छन्। यो बीचमा उनको बालकथा सँगालो 'ह्यारुन एन्ड द सी स्टोरिज' निस्कन्छ। 'द लास्ट मुरस् साई', 'द ग्राउन्डबीनीथ हर फीट' अनि 'फ्युरी' जस्ता शक्तिशाली उपन्यास निस्कन्छन्। विविध पुरस्कार पाएका उनी कथा र साहित्येत्तर कृतिहरूको सम्पादन पनि भ्याउँछन्। २००२ यता लेखिएका उपन्यासका प्लटहरू उनको मनमा सलबलाउन थालिसकेको पाठकलाई थाहा हुन्छ। इरानबाट आएका धम्कीप्रति उनलाई त्यत्ति आश्चर्य लाग्दैन। तर बेलायती मुस्लिमहरू, जसलाई विश्वकै सबभन्दा उदारवादी मुस्लिम भनेर चिनिन्छ; तिनले खोलेका संघसंस्थाबाट पनि आउन थालेका धम्की र गालीले रुस्दीलाई निकै दुखित पार्छ। यसैक्रममा उनको उक्त विवादित उपन्यासलाई जापानी भाषामा अनुवाद गर्ने जापानी लेखकको गोली हानेर हत्या गरिन्छ। त्यही उपन्यासको नर्वेली प्रकाशकमाथि पनि हमला हुन्छ। तीन गोली खाएर पनि उनी बाँच्छन्। उनलाई समर्थन गर्ने मुस्लिम लेखक र विचारकहरूमाथि पनि सांघातिक हमला हुन थाल्छन्। 'ओई सलमान, अब तेरा दिन सिध्दिए। तँ सैतानको घर जाने बेला भयो। मैले थाहा पाइसकें, तँ कहाँ लुकेर बसेको छस्। अब केही दिनमात्र...! हाहाहाहा...!' फिल्मी संवादमा रुस्दीमाथि धम्कीका पत्रहरूको ओइरो लाग्न थाल्छ। उपन्यास प्रकाशकका वितरण केन्द्र र पसलअगाडि बम पड्किन थाल्छन्। यसबाट विचलित किताब पसले र प्रकाशक आफ्ना कर्मचारीहरूको जीवनलाई ध्यानमा राखेर रुस्दीका किताब लुकाउन थाल्छन्। कति प्रकाशन गृह त उनका नयाँ या पुरानै किताबका मुद्रण गर्न हिच्किचाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय हवाइसेवा उनका लागि सेवा दिन तयार हुन्नन्। विशेष बैंकसँग गरिने आर्थिक कारोबारमा सलमान रुस्दी भन्ने नाम आइरहँदा थप खतरा हुने भएकोले उनी आफूलाई मन परेका लेखक जोसेफ कन्राड र एन्टन चेखबबाट आधाआधा नाम मिलाएर नयाँ नाम राख्छन्, जोसेफ एन्टोन। यो बाह्र्र–तेह्र वर्षबीच रुस्दीको जीवन नाटकीय ढंगले अघि बढ्छ। उनी आफ्नो त्यो विवादित उपन्यासको सफ्ट कभरको पुनर्मुद्रण गर्न चाहन्छन्, पैसा कमाउनभन्दा पनि लेखकको अस्मिता बचाउनका लागि। यो संसारमा लेखक र पाठकहरू स्वर्गबाट आगो चोरेर ल्याउने शक्तिशाली मनहरू हुन्। तिनलाई पनि आउँछ आफ्नो शक्ति देखाउन। उनको यही विचारले बेलायतलगायत युरोपका विभिन्न देश र इरानबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध पनि बिग्रन थाल्छ। तेलको राजनीतिले यहाँ पनि प्रवेश गर्छ। आत्मालोचना गरेर लेखे अनि धार्मिकगुरुहरूसँग माफी मागे, उनलाई मात्रै होइन बेलायती कुटनीतिक अधिकारीलाई पनि साजिलो हुने ब्यहोरा रुस्दीसमक्ष आइरहन्छ। स्वाभिमानी रुस्दीलाई यस्तो सौदाबाजी मन पर्दैन।यही बीच बेलायतमा लेबर पार्टीको सरकार आँउछ। टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री हुन्छन्। इरानमा पनि नयाँ आयातुल्ला खुमिनीको आगमन हुन्छ। सरकारमा पनि परिवर्तन हुन्छ। अमेरिकामा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति हुन्छन्। 'तिमीलाई थाहा छैन रुस्दी, मेरो काम कति गाह्रो छ। हुन त बेलायतको प्रधानमन्त्री हुँ।' ब्लेयर गुनासो गर्छन्। 'ए, मजस्तो लेखक भएर पनि हेर न मिस्टर प्रधानमन्त्री, म भएर बाँच्न झन् कहाँ सजिलो छ र!'एकै भेटमा ब्लेयर र रुस्दी साथी बन्छन्। 'लौ हेर, सलमान रुस्दी एउटा बाठो मानिसभन्दा अरू केही पनि होइन। राजकीय मोज गर्दै छ। बेलायती महारानी र अन्य राजपरिवारका सदस्यले पाउने सुरक्षा र जीवनशैलीमा हिँड्छ। मोटाएको छ। जनताले तिरेको करको पैसाको हुनसम्म दुरुपयोग भयो नि।' स्वयं प्रिन्स चार्ल्स, बेलायती राजकुमार पनि यस्तै तर्क राख्छन्। समकक्षी लेखकहरू पनि रुस्दीमाथि त्यत्ति दया देखाउँदैनन्। खरो स्वभावका रुस्दीले मनग्यै खुच्चिङ भन्ने साथी पनि कमाइसकेका थिए। यति बेला भने रुस्दीलाई युरोप र अमेरिकाको स्वतन्त्र प्रेसले ठूलो सहयोग गर्छन्। उनलाई आफ्ना विचार राख्न अवसर दिइरहन्छन्। 'ल ठीकै भयो, रुस्दीले झन्डै चार्ल्सले पाउने सुविधा पाएछन्। तर त्यत्ति सुविधा पाएर पनि खै चार्ल्स महाशयले एउटा किताब पनि लेख्न नसकेको!' रुस्दीलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू मिडियामा बेला–बेलामा हुँकार गरिरहन्छन्। संसारका विभिन्न कुनाबाट माया अनि श्रद्धाका शब्दहरू फूलजस्तै उनीमाथि बेला–बेला खसिरहन्छ। साहित्य लेखेर संसारलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ। लेखक आम मानिसको सबभन्दा आत्मीय साथी हो भन्ने रुस्दी कुनै अपराधीजस्तो अरूको आँखाबाट बचेर निस्कनुपर्दा, यात्रा गर्दा र आम नरनारीले झेल्नुपरेको झमेला देख्दा दिक्क हुन्छन्। मन लागेको ठाँउमा जाउँ्क लाग्छ, मन परेका मित्रलाई भेट्न मन लाग्छ; तर त्यसो गर्न पाउँदैनन् उनी। उनलाई जीवन नै जेलजस्तो लाग्छ। आफ्नो जीवनमा सबभन्दा माया गर्ने देश भारतले पनि लामो समयसम्म उनलाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउँछ। भारतको शिमलामा भएको पैतृक सम्पत्ति आखिरीमा अदालतले उनको नाममा पास गरिदिन्छ। निकै वर्षपछि केही खुकुलो अवस्थामा रुस्दी जवान छोरो जफरसँग भारत फर्कन्छन्। उनी यत्ति खुसी हुन्छन्, दिल्ली एयरपोर्टमा भारतभूमिलाई घोप्टो परेर म्वाइँ खान मन लाग्छ। उनलाई मनपर्ने र उनलाई पनि मन पराउने एडबर्ड सइददेखि दर्जनौं अन्य लेखक–विचारक क्यान्सरको कारण बित्दै जान्छन्। मनभरि द्वन्द्व र पीडा बोकेका रुस्दीलाई जीवन झनै जटिल लाग्न थाल्छ। मृत्यु कतै कुनाबाट फतवा शैलीमा आक्रमण गर्दै छ। डर र त्रासमा छन्, उनी। पुस्तकमा अरू पनि निकै पीडादायक क्षण छन्, जसले पाठकहरुलाई रुस्दीको निकट पुर्‍याउँछन्। त्यसो त निकै रमाइला क्षण पनि पुस्तक छन्। बेलायतलगायत अन्य युरोपेली देशमा कडा सुरुक्षासाथ हिँड्दा–बस्दा थकित भएका रुस्दी बेला–बेला अमेरिका जान पाउँछन्। एक दिन उनलाई भेट्न चर्चित अमेरिकी कवि एलेन गिन्सबर्ग उनी बसेको होटलमै आइपुग्छन्। 'संसार प्रसिद्ध कविले आफूलाई भेट्दा जीवनले नयाँ मोड लिन्छ कि!' रुस्दीलाई लाग्छ, 'यी कविले एकचोटि कराए भने संसार ट्वाक्क रोकिने छ।' तर, चप्पल लाएर भेट्न आएका गिन्सबर्ग आफ्नो बडेमानको झोला बिसाउँछन् र रुस्दीलाई योगाभ्यास सिकाउन थाल्छन्। ओम शान्तिको मन्त्र राम्ररी जप्न सिकाउँछन्, अनि फुत्त निस्केर जान्छन्। रुस्दी अचम्ममा पर्छन्। रुस्दीको केटी साथी पद्मा लक्ष्मीको नग्न तस्बिर फ्रान्सको एउटा ट्याब्लोइड पत्रिकाले छाप्छ। पद्मालाई यसले केही असर पार्दैन। 'बरु, यो फोटो छापेबापत मेरो पारिश्रमिक कसरी असुल गर्ने? सहयोग गर न प्रेमी!' पद्माको अनुरोधपछि विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी रुस्दी प्रेमिकाको नग्न तस्बिरको पैसा असुल गर्छन्। आफूले पाएको गोता सम्झँदै उनी बेला–बेला हाँस्छन् पनि। समकालीन लेखकसँग त्यत्ति खुसी नभएका रुस्दी अमेरिकन लेखक सुसन सोन्टाग, अफ्रिकाली लेखक नादिन गोर्डिमर अनि भारतीय मुलकी क्यानेडियन कलाकार दीपा मेहतासँग निकट रहेको बु‰न सकिन्छ। उनलाई सहयोग गर्ने आत्मीय लेखकको सूचीमा गार्सिया मार्केज, भाख्लाव हावेल अनि ह्यारोल्ड पिन्टर आदि पर्छन्। दर्जनौं प्रकाशन गृह छन्। रुस्दी र प्रकाशक गृहहरूको जोडीलाई एक्काइसौं शताब्दीको स्वतन्त्र प्रेस अनि पठन संस्कृतिले बनाएको बलियो शक्तिको रूपमा बु‰न सकिन्छ। उनी जानीजानी पाठक, लेखक, प्रकाशक र विचारकका माझ जान चाहन्छन्। उनी देखाउन चाहन्छन्, लेखक पनि कम ज्याद्रो हुँदैन। ऊ पनि डरलाग्दा शक्तिहरूसँग लड्न सक्छ। पाठकहरू ८० को दसकदेखि अंग्रेजी साहित्यमा कलम चलाउने लेखकहरूको आनीबानी र तिनका शैलीबारे केही मात्रामा भए पनि परिचित हुन्छन्। कति लेखकहरू रुस्दीसँग पूर्वाग्रही भएझैं उनी पनि कम छैनन्, यस मामिलामा। भारतमा उत्कृष्ट साहित्य अंग्रेजी भाषामै लेखिएका छन्, जत्तिको बलियो अरू भारतीय भाषामा लेखिएका छैनन्। यो विवादित धारणाको रुस्दीले पुस्तकमा समर्थन जनाएका छन्। रुस्दी साँच्चि नै अलि जटिल र अप्ठ्यारा मानिस पनि हुन्। एकचोटि भनेपछि भन्यो भन्यो। आत्मालोचना गर्न मन नपराउने लेखक।संसारको सबभन्दा बलिया लेखकमध्ये एक, सबैलाई पुग्नेे जोस र चिन्ता बोकेर हिँड्ने, चानचुन ६६ वर्षका रुस्दी अझै पनि केही धर्मगुरु अनि अतिवादी संस्थाहरूका निशानामा छन्। उनीमाथि राखिएको फतवा अहिले पनि जारी छ। रुस्दी अहिले अमेरिकामा लेखेरै बसेका छन्। उनको चौथो जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध पनि २००७ मा नै टुंगिइसकेको छ। लेखन कार्यलाई दिएको उनको निरन्तरता लेखकहरूले लडेका केही महŒवपूर्ण युद्धमा पर्छन्। लेख। लेखकहरू हो, लेख। भत्काओ पुराना पर्खालहरू। हल्लाऊ पुरानो धर्ती। च्यात पुराना विचारका बादल। पानी पार, पानी। हिन्दु, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धमार्गी अनि अन्य स्वभावका धर्म अनुयायी हुनुभन्दा अगाडि हामी कथावाचकी थियौं। कथा हाम्रा लागि बाँच्ने आधार थियो। र, छ। त्यसैले पनि नयाँ कथा आवश्यक छ। उज्यालोका सन्तानहरू अब धेरै भइसके। तिमीमाथि सम्पूर्ण शक्ति खनिन सक्छन्। तर, स्वतन्त्र लेखनको वकालत गर्न कहिल्यै नछोड। शक्ति साधनाबाट आउँछ। लेखकले आर्जन गरेको शक्तिले सबैलाई बचाउँछ। यो पुस्तक पढेको महिनौं दिनसम्म पनि रुस्दी पाठकका मनबाट हराएर जाँदैनन्। सलाम रुस्दी, तिमी अनि तिम्रो संघर्षपूर्ण यात्रालाई। Tweet Leaveacomment Message *
साइकलमा मुस्ताङबिहान आठ बजेको थियो, जोमसोम विमानस्थलमा ओर्लंदा। मौसम निकै घमाइलो। विमानस्थलको टुप्पीमा निलगिरि हिमाल। दक्षिण पश्चिम कुनामा धौरागिरि चुचुरो। खर्च गर्न सक्नुपर्‍योपहिलेको बजेट निर्माण र अहिलेको बजेट निर्माणमा एउटा फरक छ। पहिले विकास बजेट भन्नासाथ गाविस र जिविसबाहेक बाँकी सबै विदेशी सहायतामा निर्भर हुन्थ्यो। अहिले राजस्व वृद्धिदर सन्तोषजनक छ। तैपनि सरकारको...	दिमागमा गज्जबको झड्कामनको हुस्सु पहिल्याएर अघि बढ्नु सजिलो छ त?लाग्छ एउटा ठुलै जोखिम। यो त कुरा भो मनको। बाहिरको पनि कुरा गरौँ। यात्रामा रहेका अरुको पनि कुरो गरौँ। दुर्घटनाको जोखिम हत्केलामै नचाउँदै...	डलर पछ्याउँदै सात महिनामा अमेरिकाबेरोजगार नेपाली युवालाई डलर कमाउने सपना देखाएर दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुक घुमाउँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका लैजाने मानवतस्कर सञ्जालको खोजमूलक समाचारका लागि पौडेल पुरस्कृत भएका छन्। 'डब्लुएमएस (वर्ल्ड मिडिया समिट) ग्लोबल...	घलेगाउँदेखि काउलेपानीसम्मसुर्योदय घलेगाउँको जस्तो होस्। सेताम्य हिमालहरूले घेरिएको र कलाकारले क्यानभाष माथि कोरिदिएको तस्विरमा जस्ता घरहरुको सुन्दर बस्ती हो घलेगाउँ। बिहानी हुनु अगावै चाँदीजस्ता हिमालले गाउँमाथि आभा छरेझैं हुन्छ। घामको झुल्कोसंगै...	बिरामीमाथि खुलेआम 'लुट'– बाथरुममा लडेर घाइते भएकी चञ्चलादेवी साहलाई जेठ पहिलो साता बल्खुस्थित बयोधा अस्पताल भर्ना गरियो। आकस्मिक कक्षमा राखिएकी उनलाई अस्पतालले पछि आइसियुमा सार्योस। आइसियुमा सार्नुअघि श्रीमान शत्रुघ्नलाई वार्डमा राख्ने कि...	गरिबका डाक्टर, निःशुल्क उपचारप्युठान-यहाँका बिरामीले डाक्टर खोज्दै जानुपर्दैन, डाक्टर नै रोगी खोज्दै गाउँघर चहार्छन्। ६० वर्षको उमेरमा पनि बिहानदेखि राति अबेरसम्म बिरामीकै खोजी र उपचारमा व्यस्त छन्, यी डाक्टर। अर्थात्, डा. लेखराज सुवेदी।	फुटाउने हातमाघ ८ को पूर्वसन्ध्यामा संविधानसभाभित्र माइक, कुर्सी, बेन्चलगायत फुटाउने कार्य भए। नेताहरू भन्छन्, ‘शोषित, पीडित, गरिब र निमुखा जनताका लागि संविधान बनाउनका लागि यसो गर्नु बाध्यात्मक परिस्थिति हो।' जनता के...	नागरिक शनिबार	एउटा पुरानो छापामार'हान्ने राँगोजस्तै भएर आइस् नि? आँखा पनि राता न राता छन्! के भो तँलाई ए शंकर?'फलैँचामा...	दुइटा नाक भएका मान्छेम उनलाई सम्झाइरहेको थिएँ, छोरीको बिहामा फजुल खर्च गर्नु हुन्न।मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै ती वुज्रुगले भने,...	मेरो रंगयात्रामा सर्वनामतीस–एकतीस सालतिरको धनकुटा। गोकुण्डेश्वर हाइस्कुलको सानो हलमा नियमित नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। टिकटमा नाटक मञ्चन हुने परम्परा...	भाषिक अव्यवस्थाकुनै गलत कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यािएर सत्य प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयासमा कतिपय मानिस लागिरहेका हुन्छन्। यहाँ...	भर्खरै...